kkchha.com:: फुटबल खेलाडी सम्मानित
फुटबल खेलाडी सम्मानित
केकेछ डटकम – प्रकाश घिमिरे – काठमाण्डौ – मंसिर २९
सोलाडिरीटी कप जितेका नेपाली फुटबल खेलाडीहरु आज काठमाण्डौमा सम्मानित भएका छन् । डिजीटल पत्रिका नेपाली पब्लिक डट कम र मायाज वाक्सले खेलाडीहरुलाई सम्मान गरेको हो । नेपाली पब्लिक डट कमले आफ्नो उद्घाटन समारोहको अवसरमा राखेको सम्मान कार्यक्रममा एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल र त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर जिवनाथ धितालले खेलाडीहरुलाई सम्मान पत्र र मायाको चिनो हस्तान्तरण गरी सम्मान गरेका थिए । नेपाली फुटबल टिमका कप्तान बिराज महर्जन, भरत खवास, रविन श्रेष्ठ, बिकेश कुथु, राजेन्द्र रावल, आदित्य चौधरी, दिपक गुरुगँ, रञ्जन बिष्ट, कमल श्रेष्ठ र जितेन्द्र कार्की सम्मानित भएका हुन ।
सम्मान समारोहमा एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले नेपाली खेलाडीहरुका कारण नेपालको गरीमा बढेको बताए । “तपाईहरुले निकै राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ”, एसएसपी खनालले भनेः “तपाईहरु पैसाको लागि भन्दा देशको लागि खेल्नुस ।” खेलाडीहरुले थप मेहनत गरे नेपाली फुटबलले अझै राम्रो गर्न सक्ने उनले औल्याए । खेलाडीहरु आर्थिक रुपमा पनि सबल हुनुपर्नेमा जोड दिदै एसएसपी खनालले भने, “तर, आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुलुकको इज्जतमा आँच आउने काम चाँहि गर्नु हुदैन ।” हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरु ईमान्दार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
प्राध्यापक डाक्टर जिवनाथ धितालले हरेक क्षेत्रमा यूवाहरुले देशको अभिभारा बोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ”युवाहरुको जोश र जागरले मुलक अघि बढ्छ”, प्रा. डा. धितालले भने, “युवाहरु हरेक क्षेत्रमा अघि सर्नुपर्छ ।” नेपाली फुटबल खेलाडीहरुलाई धन्यवाद दिदै उनले अझै राम्रो प्रदर्शन गर्न शुभकामना दिए ।
नेपाली पब्लिक डट कमका संस्थापक तथा मायाज वाक्सका कार्यकारी निर्देशक सुदिपचन्द्र बख्रेलले छिट्टै दुई जना खेलाडीहरुलाई आफ्नो कम्पनीसँग अनुवन्धन गर्ने घोषणा गरे । “खेलाडीहरु आर्थिक रुपमा सुरक्षीत भएमात्र उनीहरुले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छन्,” उनले भने “हामी हाम्रो तर्फबाट नेपाली खेलाडीहरुलाई सक्दो साथ दिन तयार छौ ।” नेपालको स्वाभिमान कायम राख्नका लागि नेपाली खेलाडी र नेपाली उत्पादनलाई माया गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक बख्रेलले जोड दिए